Ngakho-ke ungabona umcimbi wesethulo we-iPhone 13 | Izindaba ze-IPhone
U-Ignacio Sala | 15/09/2021 18:00 | I-Apple Watch, iPhone 13
Izolo ngo-19: XNUMX kusihlwa (isikhathi saseSpain) isihluthulelo sokwethulwa kwebanga elisha le-iPhone, umcimbi lapho kwethulwe ne-Apple Watch Series 7 entsha, ukuvuselelwa okulindelwe isikhathi eside kwe-iPad mini ne-iPad entsha. Uma ungenalo ithuba lokubona isethulo bukhoma, i-Apple isinikeza ithuba lokusijabulela ngokusebenzisa izindlela ezimbili.
Ngakolunye uhlangothi, singakwazi finyelela ekhasini lasekhaya le-Apple. Ekhasini eliyinhloko kukhona isixhumanisi esivumela ukuthi sifinyelele umcimbi. Kepha, uma ungakwazi ukukubona konke ngasikhathi sinye, into enhle ongayenza ukuya ku-YouTube, lapho itholakala khona, futhi esivumela ukuthi siqhubeke nokubuka lapho sigcine khona.
Uma ungalawuli okuningi ngesiNgisi, kusuka ku-YouTube ungakwaziFaka imibhalo engezansi yaseSpain ngakho-ke awuphuthelwa noma yimuphi umzuzu womcimbi. Ngaphezu kwalokho, emininingwaneni yevidiyo, sinezinqamuleli ezingxenyeni zevidiyo lapho kwethulwa khona wonke amadivayisi nemikhiqizo:
Isethulo se-iPad siqala ngomzuzu wesi-5.
I-mini mini yethulwe ngomzuzu ka-11.
Ngemuva kwemizuzu eyi-10, i-Apple Watch Series 7 yafika endaweni yesehlakalo.
I-Apple Fitness + imemezele ukwethulwa kwayo emazweni amaningi ngomzuzu wama-30.
Ngomzuzu 37 kwethulwe i-iPhone 13.
Ngemuva kwemizuzu engu-20 kwethulwe i-iPhone 13 Pro.
Ngemininingwane yale vidiyo, a isixhumanisi esiqondile ku-Apple Music yazo zonke izingoma lokho kuzwakale ngesikhathi somcimbi, isigaba i-Apple esivame ukusinakekela ngokukhethekile emcimbini ngamunye.
Ngokwamanye amahlebezi, ngo-Okthoba i-Apple ihlela ukwenza esinye isethulo, isethulo esizogxila ekwethuleni i-Mac range entsha, ibanga elizophathwa yi Iprosesa yesizukulwane sesibili i-M1 eyethulwe yinkampani eseCupertino ngonyaka owedlule futhi itholakala ngaphakathi kwe-iPad Pro 2021.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba ze-IPhone » Ama-terminals we-IPhone » iPhone 13 » Ngakho-ke ungabuka futhi umcimbi wokwethulwa kwe-iPhone 13